Nhau - Makiromita mangani ekuchinja mabhureki emabhureki nguva dzese?
Ruoko akamedura Valve
Spare zvikamu zveMercedes-Benz
Spare zvikamu zveScania
Spare zvikamu zveVolvo
Spare zvikamu zveDAF
Spare zvikamu zveIVECO
Spare zvikamu zveMAN
Spare zvikamu zveRENAUL
Makiromita mangani ekuchinja mabhureki emabhureki nguva dzese?
Zvinonzi mabhureki emabhureki haana kugadziriswa kangani kuti achinje. Zvinoenderana nemamiriro ekutyaira uye maitiro ekutyaira. Iyi tsika inokanganisa mashandisirwo emabhureki emabhureki. Kana iwe uchikwanisa kuzvibata zvakanaka, uchaona kuti mune dzakawanda zviitiko hapana chikonzero chekutsika mabhureki zvachose. Kana iyo firimu ikashandiswa zvakanaka, inogona kusvika makiromita zviuru zana.
Zvino, pasi pemamiriro api ezvinhu anoda kutsiva mabhureki emabhureki, iwe unogona kuenda kuburikidza neanotevera ongororo, uye woitsiva nekukasira kana ivo vakasangana nemamiriro acho.
1. Tarisa ukobvu hwemabhureki emabhureki
Tarisa kuti mabhureki emabhureki akaonda here. Unogona kushandisa tochi diki kuti utarise uye kuongorora. Kana iyo ongororo ikaona kuti dema kukweshera zvinhu zvemabhureki mapedhi zvava kuda kupera, uye ukobvu uri pasi pe5 mm, iwe unofanirwa kufunga kuzvitsiva.
2. Kurira kwebhureki
Kana iwe uchinzwa simbi ine hukasha ichirova mumabhureki panguva yekutyaira kwezuva nezuva, unofanirwa kuteerera panguva ino. Iyi ndiyo alarm yesimbi pamabhureki emabhureki atanga kupfeka brake disc, saka iri inopinza simbi inorira.
3. Braking simba
Paunenge uchityaira mumugwagwa uye uchitsika mabhureki, kana iwe uchinzwa uchinetseka zvakanyanya, panogara paine hunyoro kunzwa. Zvinowanzo fanirwa kumanikidza brake zvakadzama kuti uwane yapfuura braking maitiro. Kana mabhureki echimbichimbi ashandiswa, chinongedzo chinenge chiri pasi. Zvinogona kunge kuti mabhureki emabhureki akarasikirwa nekukwesana uye anofanira kutsiviwa panguva ino, zvikasadaro tsaona yakakomba ichaitika.
Makiromita mangani ekuchinja brake disc?
Kazhinji kutaura, iyo brake disc inoshandurwa wega wega 60,000-70,000 makiromita, asi iwo maratidziro achiri anoenderana nemashandisirwo emuridzi maitiro uye nharaunda. Nekuti munhu wese ane tsika dzakasiyana dzekutyaira, mabhureki emabhureki uye mabhureki emabhureki akasiyana. Muchokwadi, mabhureki emabhureki uye mabhureki emabhureki ibasa rakakosha rinofanirwa kuongororwa usati watyaira. Zvimwe zvitoro zve4S zvechokwadi zvine mutoro uye zvinogona kukuyeuchidza kuti mabhureki emabhureki anoda kuchinjwa.
Kana mabhureki emabhureki atsiviwa kakawanda, kupfeka kwemabhureki emabhureki kunowedzera. Panguva ino, akamedura discs anofanira kutsiviwa. Mabhureki emabhureki anofanira kutsiviwa mushure mekunge maviri kana matatu mabhureki akatsiviwa mune imwe switch. Naizvozvo, kana uchitsiva mabhureki emabhureki, mabhureki emabhureki anofanirawo kuongororwa nenguva, nekutsiviwa kana akanyatso kusakara.
Pamusoro pekupfeka kwese kweiyo disc bhureki, kune zvakare kusakara kunokonzerwa nehunhu hwebhureki rebhureki kana bhureki rebhureki uye kuumbwa kwechinhu chekunze panguva yekushanda kwese. Kana iyo brake hub yakapfekwa neyekunze nyaya, iyo yakadzika groove kana yediski pamusoro yekupfeka kukanganisa (dzimwe nguva yakatetepa kana gobvu) Zvinotsigirwa kuti iyo yekutsiva ichakanganisa zvakananga kwedu kutyaira kuchengetedzeka nekuda kwemusiyano mukusakara nekubvaruka.
Pfungwa dzekucherechedzwa mukuchengetedzwa kwemabhureki emabhureki: Nekuti mabhureki emabhureki achaburitsa kupisa kwakawanda panguva yekumisa mabhureki, usageze mota nekukasira mushure mekunge mota yabhuroka. Iwe unofanirwa kudzima mabhureki kuti udzikise tembiricha yepasi pemabhureki emabhureki ekudzivirira ekudzivirira-epamusoro mabhureki ekuzvimba nekuda kwekusangana nemvura inotonhora. Cold shrinkage inogadzira deformation uye kutsemuka. Uye zvakare, yakanakisa nzira yekuwedzera hupenyu hwebrake disc ndeyekuchengetedza tsika yakanaka yekutyaira uye kuyedza kudzivirira kumira kamwe kamwe.
Post nguva: Aug-27-2020
Nyorera kuInquiry Yedu:
93 Tianyang Road, Fengqiao taundi, Zhuji Guta, Zhejiang Province